हनामी - एक जापानी परम्परा तपाईले आफ्नो जीवनमा एक पटक बाच्नु पर्छ Absolut यात्रा
सुसाना Godoy | | जापान
के तपाईंलाई थाहा छ? हानमी? हामी शब्दको अर्थको बारेमा सोधेका छैनौं, तर सबै चीजको बारे जुन यो प्रतीक हो। ठिक छ, तपाईले यस बारेमा सोच्नु भन्दा पहिले, म तपाईंलाई भन्छु कि हामी एक शब्दमा संकलन गरिएको यस सुन्दर परम्पराको बारेमा अझ बढी बुझ्न जापान जानु पर्छ।
हामीसँग पहिले नै स्थान छ र यसको कारण फूलहरू छन्। त्यसैले चेरी रूखहरू चाँडै दिमागमा आउँछन्। हो, चेरी खिल सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, जसलाई पनि भनिन्छ Sakura जब चेरी रूख खिलिरहेको छ। खैर, तिनीहरू हनामीका अंश हुन्, जसको परम्पराले आज हामी यसको सबै रहस्यहरू प्रकट गर्नेछौं।
1 हनमी भनेको के हो?
2 यस जस्तो परम्परा कहाँबाट आउँदछ?
3 हामी यो फूल शो कहिले देख्न सक्छौं?
4 परम्परागत स्थानहरू Hanami मनाउन
हनमी भनेको के हो?
हामी यसलाईaको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं जापानी परम्परा। अवश्य पनि, यो सब भन्दा मन पराइएको र अनुसरण गरिएको हो। किनकि यसले रमाईलो गरीरहेको छ र कसरी चेरी रूखहरू खिल्यो। त्यो हो, यो एक प्रकारको अनुष्ठान हो जहाँ सबैजना यसको स्थानको सुन्दरता हेर्नका लागि विशेष स्थानहरूमा जान्छन्। यो सुन्दरता तथ्यमा आधारित छ कि चेरी खिल प्रकाशमा आएको छ र यसले सम्पूर्ण शहरलाई यसको गुलाबी मन्टलले ढाकेको छ। यो पक्कै पनि एक सुन्दर समय हो, सडक र पार्कहरूलाई अत्यन्त मीठाईमा रंगाउँदै। त्यसैले यो एक महान क्षण भएको छ।
यस जस्तो परम्परा कहाँबाट आउँदछ?
यो भनिन्छ कि यो धेरै वर्ष पुरानो हो। प्रत्येक चोटि रूखहरूमा फूलहरू बढ्दै गरेकोले, त्यस क्षणले वसन्तको शुरुआतलाई चिह्न लगाउँदछ जस्तो सबैलाई थाहा थियो। तर यो मात्र होइन तर यो संकेत पनि थियो कि धान रोप्ने मौसम। एक बर्षभित्र तोकिएको समयलाई संकेत गर्नुको अलावा, यो भन्नु पर्छ कि यी प्रकारका रूखहरूलाई पवित्र मानिन्थ्यो।
किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि देवताहरू आफूभित्रै बस्छन्। त्यसकारण, फसलको सुरुआत हुँदा र यो फूलमा थियो, यो अनुवाद गरिएको थियो कि देवताहरू ध्यान दिएका थिए फसल राम्रो बनाउन। तसर्थ, धार्मिक इतिहास को पहिलो आधार भनिन्छ हानमी परम्परा। वसन्त butतुको आगमन, तर पनि देवताहरूको वंश पृथ्वीमा, सहयोगको रूपमा।
तर यो सत्य हो कि अलि अलि गर्दै उसले धार्मिक आधार लिन छोडे र त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू पनि छन् जुन यससँग सम्बन्धित छन् समुराई। त्यो हो, जीवनको प्राइममा हुँदा पनि मर्न पाउनुको प्रतिनिधित्व। यसबाहेक, त्यहाँ एउटा पौराणिक कथा छ जुन भन्छ कि सुरुमा फूलहरू सेता थिए, तर थोरै बित्तिकै उनीहरू योद्धाहरूको रगतले दाग लागेका थिए र हामीले जानेका गुलाबी रंगहरू लिए।
हामी यो फूल शो कहिले देख्न सक्छौं?
भनिन्छ कि फेब्रुअरीको अन्त्यमा पहिलो फूलहरू पलाउन थाल्छन्। अलि अलि गर्दै र मे सम्म देशको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। किनकि तिनीहरू पहिले दक्षिणी क्षेत्रमा देखा पर्नेछन् र अलि अलि तिनीहरू उत्तरमा जान्छन्, जुन शो हेर्न अन्तिम हुनेछ। जे होस् क्षेत्र जुन सधै स्कूप हुन्छ ओकिनावा टापु, मार्चको सुरुमा तपाईंसँग पहिले नै चेरी फूलहरू छन्। होक्काइडो जस्तो नभई, जुन अर्को काउन्टरपोइन्ट हुनेछ, किनभने मेको सुरू सम्म उनीहरूले यो परम्परा मनाउँदैनन्। कहिलेकाँही हामी छक्क पर्दछौं कि यो जनवरीको अन्त्यमा पनि फूलमा देख्न सकिन्छ, यद्यपि यो सामान्यतया सामान्य हुँदैन।
परम्परागत स्थानहरू Hanami मनाउन
यद्यपि यी रूखहरूले पहिले नै देशको धेरै कुनाहरू ओगटेका छन्, त्यहाँ सँधै बढी भ्रमण गरिएका क्षेत्रहरू छन्। ती मध्येका केही छन् टोक्यो मा Ueno पार्क वा क्योटोमा हियान तीर्थ वा कामोगावा। ओसाकामा मुख्य बुँदा क्यासल पार्क र नारामा केन्द्रित छ र पार्कमा पनि उसको नाम रहेको छ। अर्कोतर्फ, होक्काइडोमा हामीसँग गोरियोकाकु कैसल पार्क र ओकिनावामा नाकिजिन महल छ।
अवश्य पनि, आज पार्टीले सबैलाई विभिन्न पार्क र पहाडहरू र क्षेत्रहरूमा सँगै ल्याउँदछ जहाँ तपाईले चेरी रूख पाउन सक्नुहुन्छ, जुन प्रत्येक कुनामा छ। परम्परा भन्दा बढी, यो एक ठूलो पार्टी भएको छ जहाँ तिनीहरू प्रायः घाम अस्ताउन्जेल खाने र पिउन भेला हुन्छन्। अहिले यो चिन्तनशील भन्दा बढी उत्सव हो। अझै पनि, सबैले मनाउँछन् कि तिनीहरू एक अद्वितीय वातावरणले घेरिएका छन्, जुन सुन्दर कपडाले ढाकिएको छ र परम्पराहरूले भरिएको साथ साथै किंवदन्तीहरू पनि। जबसम्म यो जान्छ, यी रूखहरू पवित्र रहन्छन्।
तसर्थ, तपाईं ती मध्ये कुनै एकमा जानुपर्दछ, पार्कमा आरामसँग बस्नको लागि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नुहोस्, दिउँसो वा त्यहाँ पूरै दिनको आनन्द लिनुहोस्। अनुभव अद्वितीय र आरामदायक छ। कहिलेकाँही तपाईं शहरबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ र अधिक प्रकृति वा नदीको किनारमा रमाउन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, मुख्य कुरा तपाईको जीवनमा कम्तिमा एक पटक यो बाँच्नु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » हानमी